Waxaad halkan ka heleysaa waxyaalaha mamnuuca ah, talooyinka iyo talobixinada hadda shaqeynaaya ee cudurka aafada ah dartiis loo soo rogay oo la soo koobay. Waxaanu waxyaalaha la soo koobay ka soo dooranay talooyinka iyo talobixinada adiga shakhsi ahaan ku saameynaaya. Boggan ayaa caadi ahaan hal mar todobaadkii dib loo cusbooneysiiyaa.
Uppdaterades 22 apr 2022 09:57
Covid-19 ayaan hadda ka dib aheyn cudur dadweynaha u khatar ah oo bulshada u khatar ah
Laga bilaabo 1 Abriil, ayaan dib danbe Covid-19 loogu arkeynin inuu yahay cudur dadweynaha u khatar ah oo bulshada u khatar ah, ayay ku soo wargalinaysaa Hay'adda Caafimaadka Bulshadu. Waxase uu cudurku weli sii yahay mid ay qasab tahay in la soo sheego, taas oo micnaheedu yahay in kiisaska la xaqiijiyey ay tahay in la ogeysiiyo dhakhtarka xakameynta infegshanka ee gobolka iyo Hay'adda caafimaadka bulshada. Raadgurka infekshanku waa in uu wali ka socdaa daryeelka caafimaadka iyo xanaanada meesha ay ku jiraan dad khatar weyn ugu jira inay si xun ugu xanuunsadaan.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan covid-19 ka akhri Hay'adda Caafimaadka Bulshada. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Is tallaal haddii aad kari karto. Waxay Hay'adda caafimaadka bulshadu soo jeedinaysaa in dhamaan dadka 12 sano jir ah iyo wixii ka weyni ay Covid-19 iska tallaalaan. Waxa uu kaasi hoos u dhigeyaa in cudurka si xun loogu jirado iyo dhimasho.
Wax dheeraad ah oo talaalka covid-19 ku saabsan ka akhri
Guriga joog haddii aad xanuunsaneyso
Haddii aad leedahay calaamado waa inaad guriga joogtaa.
Haddii qof qoyska ka tirsani uu jirado waa inay dadka intiisa kale aad ugu fiirsadaan calaamadaha. Dadka aan calaamadaha laheyn ayaa shaqada, dugsiga ama waxqabdyada wakhtiga firaaqada sidii caadiga aheyd ugu tagi kara.
Talo gaar ah oo ku socota dadka bilaa tallaalka
Qofka bilaa tallaalka ah ayaa khatar badan oo inuu si xun Covid-19 ugu jirado leh ayaa u baahan inuu si aad ah ugu taxadiro. Sidaa darteed, ka fogow meelaha gudaha guryaha ah ee ay dad badani isugu yimaadaan.